Taliyaha Ciidanka Asluubta oo faah faahiyay dhacdadii ka dhacday Xabsiga Dhexe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Taliyaha Ciidanka Asluubta oo faah faahiyay dhacdadii ka dhacday Xabsiga Dhexe
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Korneyl Mahad Cabditaxmaan Aadan ayaa faah faahin ka bixiyay sida uu ku bilaawday dagaal Xabsiga Dhexe ku dhexmaray Qaar kamid ah Maxaabiista ku xiran Xabsiga iyo Ciidamo ka tirsan ilaalada.
Taliyaha oo Shir jaraa’id Warbaahinta u qabtay ayaa sheegay in dagaalka uu yimid, kadib markii qaar kamid ah Maxaabiista oo ku guda jiray Cunto karin ay si xoog ah qorigiisa uga qaateen mid kamid ah ilaalada Xabsiga, kadibna ay toogteen.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in Maxaabiista ay sidoo kale toogteen askari kale qorigane ka qaateen, taas oo keentay in uu ballaarto dagaalka, hayeeshee ugu dambeyn ay Ciidamada Dowladda dagaalka soo afjareen.
Xaalada Xabsiga Dhexe ayaa Caawa degan, waxaana dadka badi ku xiran ay yihiin Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab, kuwaas oo xukuno kala duwan lagu riday.
Taliyaha Ciidanka Asluubta oo faah faahiyay dhacdadii ka dhacday Xabsiga Dhexe was last modified: August 10th, 2020 by Admin